【Live the Dream進捗報告】見えてきたミャンマーでの収益化│さっさの大冒険
【Live the Dream進捗報告】見えてきたミャンマーでの収益化
Live the Dream, ミャンマー, 教育, 起業, 起業家
Live the Dreamを始業してから約14ヶ月。メディア自体もいいね数20万超、MAUは常時20万超えと爆速で成長中。それに加え企業とのタイアップ動画制作やスポンサー契約も開始し、収益化・黒字化を達成。ようやく息吹が芽生え始めたのでここにお知らせ致します。
1. 増え続けるLive the Dream ユーザー
増え続けるLive the Dream ユーザー
Live the Dreamのコンテンツが結果的に企業様自身のビデオにもなる。それがこのタイアップ職業紹介動画です。我々は企業の中で働く大人の成長ストーリーや仕事内容・やりがいを明らかにして若者に届けますが、そのビデオは結果的にその企業にとってもブランドイメージアップやCSR活動、採用活動や社内の社員教育などにご活用頂けるのです。
【 ခြေလှမ်းများ နှင့် မနက်ဖြန် (၄) – စက်ပြင်ဆရာ】
【 ခြေလှမ်းများ နှင့် မနက်ဖြန် (၄) – စက်ပြင်ဆရာ】ဒီနေ့မှာ တော့ Toyota Myanmar – Aye and Sons က စက်ပြင် Technician ကိုဟိန်းမင်းစိုး အကြောင်းပြောပြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးဘ၀ အောက်ခြေအဆင့် ကနေ ခက်ခဲတဲ့ ငယ်ဘ၀ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် ကြိုးစားချင်စိတ် နဲ့ ရုန်းခဲ့တာ ခုဆို Technican ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူအလုပ်လုပ် ပုံ နဲ့ Technician အလုပ်အကြောင်းကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။———–Car Mechanic အလုပ်ဆိုတာ..◘ Car Mechanic တွေဆိုတာက ကုန်တင်ကား၊ Bus ကား၊ ခရီးသည်တင်ကား စတဲ့ ကားအမျိုးမျိုးတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းတွေကို ပြုလုပ်ပေးရသူတွေဖြစ်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတအစုံစုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Engineer တွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ◘ ခေတ်သစ်ကားလောကမှာတော့ ကားတွေကို လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ပိုအရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်ပဲ Car Mechanic တွေက ယာဉ်တိုက်မှုတွေနဲ့ အခြားကားပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေအတွက် အရမ်းကို အရေးပါအရာရောက်သူတွေ ဖြစ်နေကြတာပါ။◆ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေလိုလဲ၁။ ကားတွေ စက်တွေ အကြောင်းသိထားရမယ်ကိုယ်ကသာ စက်ပစ္စည်းတွေကို ကြိုက်တယ်၊ ကားတွေကို သဘောကျတယ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါဘဲ။ ပြီးတော့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေ၊ ကား body တည်ဆောက်ပုံနဲ့ engine တွေအကြောင်းကိုတော့ ဂဃနဏ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ၂။ စူးစမ်းလေ့လာလိုစ်ိတ်စက်ပစ္စည်းနဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကို စဉ်ဆက်မပြတ် စူးစမ်းလေ့လာနေဖုိ့လိုပါတယ်။၃။ ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်မှု Car mechanics အလုပ်ဆိုတာတစ်နေကုန်မနားမနေ လုပ်ရတာပါ။ ပြီးတော့ ဆီတွေပေမယ်၊ car body ကြီးတွေ ကိုင်တွယ်ရမယ်၊ ပစ္စည်းအလေးကြီးတွေ မရမယ် ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု ရှိဖို့က မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။၄။ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကားပြင်တဲ့အခါ အလွန်အသေးစိတ်ကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကအစ ကိုင်တွယ်ပြုပြင်ရတာမို့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု ရှိဖို့က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။၅။ ကားတွေကို ချစ်တဲ့သူCar Mechanic အလုပ်ဆိုတာ ကိုယ်ကာယကို အဓိကအသုံးပြုရတဲ့အပြင် အရမ်းလည်း ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်မို့လို့ ကားတွေကို တကယ်ချစ်တဲ့သူမျိုးမှ လုပ်ဖို့သင့်တော်ပါတယ်။◆ ပညာအရည်အချင်း"မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပညာရေးနောက်ခံက သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး။ အများစုကတော့ အောက်ခြေကနေပဲ စတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်း အတွေ့အကြုံယူသွားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။◆ ဘယ်လိုကျောင်းတွေတက်နိုင်လဲသင်တန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။mechanics သင်တန်းတွေ၊ Workshop training တွေ ၊ TU လိုတက္ကသိုလ်တွေ စက်မှုပညာအထက်အတန်းကျောင်း တွေမှာလည်း တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။**သင်တန်ကျောင်းများ**MV-Tech [Myanmar Vehicle Tech Co.,Ltd.] PH 09-456599991~4 / 01-8551395 / 01-8550396Website http://www.myanmarvtech.com/◆ အလုပ်အပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှု"ကျွန်တော်တို့ ကားတွေပြင်ပေးလိုက်လို့ customer ဘက်က အဆင်ပြေသွားရင်၊ သက်တောင့်သက်တာဖြစ်သွားရင် ကျွန်တော်တို့အရမ်းပျော်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကားတွေပြင်ရင်း စစ်ဆေးပေးရင်းနဲ့ လူ့အသက်တွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီကယ်တင်ပေးနေရသလိုပါပဲ။"◆ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလုပ်သင့်လဲ◘ ကားတွေကို ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့ ကားတွေရဲ့ အရေးပါမှုကဏ္ဍကို ပိုမြှင့်တင်ချင်တဲ့သူတွေ ◘ ကားတွေကို နှစ်သက်တဲ့သူ၊ စက်ပစ္စည်းတွေ ကိုင်တွယ်ရတာ ပြုပြင်ရတာ သဘောကျတဲ့သူ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေ◘ ပျက်စီးနေတဲ့ကားတစ်စီးကို လုံးဝအကောင်းပတိဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းလဲချင်တဲ့သူ၊ ဒီလိုဖန်တီးမှုအသစ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Live the Dreamさんの投稿 2018年11月5日月曜日
ビデオの方はLive the DreamのFBページだけで約6万再生回数を記録。このトヨタさんとのビデオを皮切りに企業さんとタイアップでどんどん職業を紹介し、ミャンマーの若者の夢を創っていけたらと思います。ご希望の方はお気軽にお申し付けください。(只今嬉しいことに多くの受注を頂き少しお待ち頂く形となっております。申し訳ありません。)
現在この流れで、ミャンマーのトップサッカー選手のThan Paing選手(日本で言う大迫的な立ち位置の選手)のロールモデルビデオをスポンサーさんと一緒に届けられるよう手配しています。このビデオは、才能に恵まれながらも地方の貧困家庭で育ちプロへの道を諦めかけたThan Paing選手が、工事現場で稼ぎながら諦めずトップ選手になるまでのストーリーを描きミャンマーの若者にも諦めないことの大切さを伝える内容になっています。
Live the Dream 新代表の就任に関して 2019.09.01
目次 1. 新代表の就任に関して1.1. 土肥からのメッセージ2. 直近のLive the Dreamについて 新代表の就任に関して 弊社 Live […]
まだわからない夢だって応援したい！〜ミャンマー初・キャリアメディア”Live the Dream”創設までの軌跡〜 2018.02.12
[…] ミャンマーでのキャリア教育メディア事業『Live the Dream』はFacebook上で20万いいねを超え黒字化も達成するなど順調に進んでおりました。(詳細はこちら) そして何よりミャンマーで事業経営する毎日は全てが初めてで、すごく刺激的で、充実した日々を送っておりました。 一方その順調そうに見える経営の中でも数多くの失敗を経験し自分に足りないものが見えて来ました。 […]